hidaraboka fehikibo nitifitra vary main'ny rivotra karazana milina - China Qingdao Antai Heavy Industry
1) mamela ny ampahany ho nianjera tao anatiny, na dia fipoahana antoka mikasika ny faritra rehetra. Ny fehin-kibo dia natao mba hanatitra tsara abrasion fanoherana, tamin'izany andro izany entana avo nanolotra fahaiza-manaony.
2) hanitsy fipoahana kodiarana sy ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo, miorina amin'ny karazana fitaovana mba hoentina, nitifitra ny vary main'ny rivotra rafitra azo antoka avo fampisehoana.
3) Noho ny atambatra nandroso / nirodana hetsika ny fitaovana, ny fehikibo nianjera nitifitra vary main'ny rivotra rafitra antoka tombony be eo amin'ny lafiny vita fanodinana tarehy sy ny fotoana fohy kokoa.
4) Mampiasa hafainganam-pandeha avo cantilever centrifugal karazana fipoahana turbine kodiarana, izay manadio tena hanatsara vokatry sy ny fahombiazan'ny. Fipoahana rehetra kodia dia mavitrika mandanjalanja amin'ny teny anglisy, izay mahatonga azy tsy manana hovitrovitra sy ny tabataba.
5) Material ny lelany, Marokoroko sy Distributor, sy ny fanaraha-maso tranom-borona avo Chrome, izay azo ampiasaina 500 ora mahery. Taiwan safidy iray hafa dia nanao zavatra manokana lelany, izay manana ora 1000-1600 androm-piainany.
6) Ny nianjera fingotra fehikibo manana ara-nofo sy ny manganese vy.
7) Pulse fiaramanidina kitapo karazana hetra vovoka, vovoka Esory fahombiazana dia ny 99%. Tsara ho fiarovana ny tontolo iainana. A cartridge vovoka karazana hetra dia afaka mifehy ny fitanana vovoka eo ambany 50 mg / m3.
8) Automatic loader ho an'ny famokarana mitohy goavana mifandray amin'ny pamokarana. (Tsy voatery)
9) Air varingarina entin'ny varavarana, mora fandidiana sy ny tsara famehezana.
famokarana T / h 0.6-1.2 1.5-2.5 5-6 10-12
Feeding vola kg 200 600 1300 3500
Maximum lanjan'ny tapa tokana kg 10 30 230 363
Savaivony ny kapila farany MG Ø650 Ø1000 Ø1092 Ø1245
Fahaiza-boky M 3 0,15 0.3 0,43 0,79
Shot-vary main'ny rivotra fahafahana Kg / min 100 250 480 700
Air boky for dedusting M 3/ h 2200 5000 5300 6500
Power fanjifàna KW 12.6 24.3 49,3 64,5
Outline dimention MG 3681 * 1650 * 5800 3972 * 2600 * 4768 4597 * 3262 * 5709 5300 * 5432 * 6814
Hidaraboka / crawler / fingotra fehikibo nitifitra vary main'ny rivotra milina manadio fahombiazana
Hidaraboka / crawler / fingotra fehikibo nitifitra vary main'ny rivotra antsipirihany milina
Kabinetra vary main'ny rivotra anaty rafitra, fingotra fehin-kibo sy ny kapila farany
Vary main'ny rivotra governemanta rafitra ivelany sary
Siny ascenseur, Separator
Electric rafitra fanaraha-maso, fikojakojana tohatra, nameplate
QR3210 voatifitra vary main'ny rivotra sy mampidina entana avy milina Loading fitaovana
Ny mpanjifa nitsidika ny orinasa
4sets QR3210 fehikibo nianjera voatifitra blasitng fametrahana milina ao Pakistan
1set QR3210 fehikibo nianjera voatifitra blasitng fametrahana milina ao Pakistan
Previous: Rolling amponga tifitra vary main'ny rivotra milina
Next: monorail conveyor tifitra vary main'ny rivotra milina
Marokoroko sy vary main'ny rivotra Shot Machine
Billet mba hanesorana Oxide Skin Voatifitra vary main'ny rivotra Cleaning Machine
Carbon Steel Shot vary main'ny rivotra Machine
Concrete Shot vary main'ny rivotra Equipmentconcrete Shot vary main'ny rivotra Machine
Concrete Shot vary main'ny rivotra Machine Price
Concrete Shot-vary main'ny rivotra Machine
Conveyor Voatifitra vary main'ny rivotra Machine
Floor Shot vary main'ny rivotra Milina
Foundry Fitaovana Of Shot vary main'ny rivotra Machine
Highway Bridge Nahazoana Shot vary main'ny rivotra Machine
Mini Shot vary main'ny rivotra Machine
Mobile nitifitra vary main'ny rivotra Machine
Mobile Shot vary main'ny rivotra Machine Fa Road Construction
Profile Steel Voatifitra Fipoahana Machine
Rebar Shot vary main'ny rivotra Machine
Road Voatifitra vary main'ny rivotra Machine
Road tena toetrany Shot vary main'ny rivotra Machine
Shot Rotoblast vary main'ny rivotra Machine
Voatifitra Fipoahana Cleaning Machine
Voatifitra Fipoahana Floor Machine
Voatifitra Fipoahana Track Machine
Shot vary main'ny rivotra
Shot vary main'ny rivotra sy Painting-dalana,
Voatifitra vary main'ny rivotra Machine Aluminum
Shot vary main'ny rivotra Machine Fa Concrete
Voatifitra vary main'ny rivotra Machine fanamboarana
Voatifitra vary main'ny rivotra Machine Price
Voatifitra vary main'ny rivotra Machine Amin'ny 2 Twin Motors
Voatifitra vary main'ny rivotra milina Fa Steel Bar
Voatifitra vary main'ny rivotra Machines Nampiasaina
Voatifitra vary main'ny rivotra Material
Small Size Shot vary main'ny rivotra Machine
Shot vary main'ny rivotra nampiasa fitaovana Sale
nampiasaina Shot vary main'ny rivotra Machine